Fanamarihana ara-dalàna - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Ny tranokala www.wkg-ch.org an'ny Fiangonan'Andriamanitra Maneran-tany (WKG Switzerland) dia natao ho an'ny fampahafantarana ankapobeny fotsiny fa tsy milaza ho marina na feno. Ny tsy fahazoana antoka amin'ny haino aman-jery dia tsy maintsy manao ireto famandrihana manaraka ireto. Amin'ny tranga manokana dia voatokana ny zo hampihatra ny fepetra mifanaraka amin'ny lalàna, ny lalàna momba ny raharaha ary ny fomba fanao.
Ny atiny tranokala
Ny WKG Switzerland dia manao dingana rehetra azo antoka mba hiantohana ny fahatokisan'ny fampahalalana naseho, fa tsy manao fanoloran-tena rehetra momba ny fahitsiana, ny fahatokisana na ny fahavitan'ny fampahalalana ao amin'ny tranokala. Ny fahazoan-dàlana manoloana ny fahasimbana ara-nofo na tsy azo atao noho ny fampiasana na tsy fampiasana ny fampahalalana nomena na amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fampahalalana diso sy tsy feno dia voavidy ara-bola.
Fandikana ny rohy sy ny fanondroana
Ity tranonkala ity dia misy rohy (references) mankany amin'ny tranokala hafa. Ny WKG Switzerland dia tsy misy fiantraikany amin'ny famolavolana na ny atiny ary noho izany dia tsy mandray andraikitra. Indrindra indrindra, lavina mazava izay tompon'andraikitra amin'ny atiny, na tsy ara-dalàna izany, na maloto fitondran-tena na tsy mifanaraka amin'ny taona. Ny mpitsidika amin'ny tranokala toy izany, izay misy rohy ao anatin'ny tranokalan'ny WKG Switzerland, dia tompon'andraikitra tanteraka amin'ny fitsidihany.
Ninia nametra ny tenanay tamin'ny endrika PDF (Adobe Portable Document Format) izahay ho fototry ny antontan-taratasy ao amin'ny tranokalanay. Mila Adobe Reader ianao vao afaka manokatra ireo antontan-taratasy ireo. Ianao dia afaka "Adobe Acrobat Reader DC" Adobe Acrobat Reader DC » misintona maimaimpoana.
Ny atiny sy ny firafitr'ireo lahatsoratra sy sary navoaka tao amin'ity tranonkala ity dia arovana amin'ny zon'ny mpamorona. Ny fampiasana tsy avelan'ny lalàna momba ny zon'ny mpamorona dia mitaky ny fanekena an-tsoratra mialoha an'i WKG Suisse. Ny fanaovana pirinty sy fisintonana avy amin'ny tranokala dia mety ho an'ny fampiasana manokana sy tsy miankina ary tsy varotra ihany.
Fanan-dalàna ara-dalàna an'io disclex io
Ireo mpampita fanambarana ireo dia tokony ho raisina ho anisan'ireo boky an-tserasera izay niorenanao. Raha tsy tokony hisy ny fombafomba na fombafomba ao amin'ity andininy ity, tsy mifanaraka amin'ny toe-javatra azo ampiharina intsony ny ampaham-piainana na ny maha-ara-dalàna azy.
WKG Switzerland dia manan-jo hanao fanovana amin'ity tranokala ity amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampilazana mialoha.